५७ हजारको नाम लाभग्राहीबाट हट्यो
काठमाडौं (अस) । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ५७ हजार ३ सय ९ जनाको नाम लाभग्राही सूचीबाट हटाएको छ । निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि लाभग्राहीमा परी २०७६ असार २१ गतेसम्म सम्झौता नगर्नेको नाम लाभग्राहीको सूचीबाट हटाइएको हो । यसैगरी २०७६ असार मसान्तसम्म पहिलो किस्ता नलि...
म्याग्दी–बागलुङ जोड्ने झोलुंगे पुल सम्पन्न
म्याग्दी । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–२ फापरखेत र बागलुङको बागलुङ नगरपालिका–५ चनौटे जोड्ने झोलुंगे पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ । सन्टेन्सन ग्रिड डिभिजन कार्यालय, ललितपुरको झोलुंगे पुल कार्यक्रमअन्तर्गत बागलुङको मालिका र म्याग्दीको ज्यामरुककोटको सिमानामा बग्न...
दाङमा १ अर्ब ६८ करोड विकास बजेट खर्च भएन
दाङ । दाङमा गत आर्थिक वर्ष पूँजीगत बजेट रू. १ अर्ब ६८ करोड ५ लाख खर्च हुन सकेन । प्रदेश सरकारले जिल्लाको विकासका लागि विभिन्न कार्यालयमार्फत विनियोजन गरेको रू. २ अर्ब ७९ करोड ९६ लाखमध्ये रू. १ अर्ब ८६ करोड ५५ लाख मात्र खर्च भएको छ । यस्तै संघीय सरकारले विनियोजन गरेको पू...
नवलपुरमा ८४ करोड २९ लाखभन्दा बढी बजेट फ्रिज
कावासोती (अस) । पूर्वी नवलपरासी (नवलपुर)मा गत आव ८४ करोड २९ लाख बजेट फ्रिज भएको छ । जिल्लालाई केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट पूँजीगत तथा चालूतर्फ गरी ५ अर्ब ७७ करोड ६४ लाख १८ हजार प्राप्त भएको थियो । त्यसमध्ये ४ अर्ब ९३ करोड ३४ लाख ६७ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक क...
काठमाडौं । असार लागेपछि सडक कालोपत्रको काम र अन्य विकासे आयोजनाले द्रुत गति लिने प्रवृत्ति नेपालका लागि नयाँ रहेन । सरकारको आफ्नै स्रोतबाट अगाडि बढाइएको आयोजना होस् वा दाताको सहयोगमा सञ्चालित आयोजना, सबैमा ‘असारे’ प्रवृत्ति छ । विकास निर्माणका लागि प्रतिकूल समय भन्ने जानकारी हुँदा हुँदै पनि बजेट फ्र...
बुद्धिमान पुन सल्यान । वर्षाले सल्यानका ग्रामीण सडक अवरुद्ध भएका छन् । वर्षाका कारण राप्ती राजमार्ग अन्तर्गतको दाङ–सल्यान–रुकुम सडकसँगै अन्य दर्जनौं ग्रामीण सडकमा क्षति पुगेको छ । सडकका ठाउँ ठाउँमा पहिरो पहिरो झरेको भने समथर सडकमा हिलो जम्दा सवारीसाधन सञ्चालनमा असहज भएको छ...
बुटवल । प्रदेश नं ५ को सरकारले प्रदेशको योजनाबद्ध विकासका लागि तयार पारेको प्रथम आवधिक योजना मंगलवार सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारको पञ्चवर्षीय आवधिक योजनामा प्रदेशको विकास योजनाबद्ध रूपले अघि बढाउने विषय एवं कार्यक्रम उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले आव २०७६/७७ को बजेट यसै आवधिक योजनालाई आधार मानेर बज...
ताप्लेजुङ (अस) । ताप्लेजुङको थुम्बेदिन–सिनाम सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ । पाथीभरा याङवरक र सिरिजंघा गाउँपालिकाबीच पर्ने सोसुङवा खोलामा आइतवार आएको बाढीले उक्त सडकमा यातायात अवरुद्ध बनेको हो । खोलामा एक्कासि बाढी आएपछि हप्पुखोला, सिनाम पुगेर फर्कंदै गरेका सवारीसाधन सिनाममै रोकिएका छन् । यस्तै ताप्लेजुङ...
विभिन्न कारण नेपाल छाड्ने मानिसको संख्या बढ्दो छ । विश्वका धेरै मुलुकमा नेपाली पुगिसकेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहनुले पनि यसको पुष्टि गर्छ । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०१८ मा नेपालको विप्रेषण आय (रेमिट्यान्स) कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ३० प्रतिशत पु...
म्याग्दी । तिलिचो ताल अब सडक सञ्जालमा जोडिने भएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय, म्याग्दीले ठिनीदेखि तिलिचो ताल नजीकै पर्ने नमखुलेकसम्म सडकको ट्र्याक खोल्ने काम शुरू गरेको हो । मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका–५ ठिनी गाउँदेखि तिलिजो ताल जोड्ने सडक निर्माण शुरू भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख डिभिज...